कति महंगा बिकिनी लगाउँछन् बलिउड अभिनेत्रीहरू ? - Web Tv Khabar
माघ १४, २०७८ शुक्रवार १५:२० बजे
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्रीहरू बिकिनी फोटोका कारण जहिल्यै चर्चामा रहन्छन् । बलिउडका सुन्दर र स्टाइलिस्ट अभिनेत्रीहरू प्रायः बिकिनी लगाएर आफ्नो खँदिलो शरीरलाई बाहिर देखाउँछन् । त्यसैले उनीहरूका फ्यानलाई उनीहरू कति मूल्यको बिकिनी लगाउँछन् भन्ने चासो सधैं भइरहन्छ ।
केही दिनअघि एक विज्ञापनको सुटिङका लागि अभिनेत्री कैटरिना कैफ मालदिभ्समा थिइन् । मालदिभ्समा गएर उनले आफ्नो स्टाइलिस बिकिनीमा विभिन्न तस्बिर खिचाइन् । कैटरिनाको नियोन मल्टी कलर बिकिनीको मूल्य १० हजार नौ सय भारु हो । कम उमेरमै दर्शकको मनमा बस्न सफल अभिनेत्री जाह्नवी कपूरले हालैमात्र बिकिनी तस्बिर पोस्ट गरेकी थिइन् । स्विमिङ पुलमा जुन बिकिनी लगाएर फोटोसुट गराएकी थिइन्, त्यो बिकिनीको मूल्य १७ हजार चार सय ९० भारु पर्छ ।
हालका दिनमा अभिनेत्री अनन्या पाण्डे आफ्नो नयाँ फिल्म ‘गहारइयाँ’को प्रमोसनमा व्यस्त छिन् । अनन्याले पनि धेरैपटक बिकिनीमा फोटोसुट गराइसकेकी छन् । उनको थ्री पिस बिकिनीको मूल्य १६ हजार दुई सय ४० रुपैंयाँ पर्छ । अभिनेत्री करीना कपूर जहिल्यै आफ्नो फेसन सेन्सबाट दर्शकलाई प्रभावित बनाइरहेकी हुन्छिन् । केही समयअघि उनले लगाएको जियोमेट्रिक प्रिन्ट स्विमसुटको चर्चा निकै भएको थियो । यसको मूल्य दुई हजार ५ सय ९० रुपैंयाँ पर्छ ।
हालैमात्र आमा बनेकी अभिनेत्री प्रियंका चोपडा पनि समय(समयमा बिकिनीको ग्ल्यामर तस्बिर पोस्ट गरिरहन्छिन् । उनले लगाउने गरेको रेड स्विमसुटको मूल्य २८ हजार दुई सय रुपैंयाँ हो । अभिनेत्री सारा अलि खान पनि स्विमवेयरलाई निकै देखिने गर्दछिन् । ओरेन्ज र पिंक रंगको स्विमवेयरमा सारा निकै सुन्दर देखिन्छिन् । यो स्विमवेयरको मूल्य १० हजार चार सय रुपैंयाँ हो ।
# बिकिनी फोटो
'सोशल मिडिया'देखि किन टाढा रहन्छन् रणवीर ?
गायिका मिलन नेवारको ‘हाँस तिमी’मा सृजना र सन्तोषको अभिनय
सिस्नुपानी नेपाल २५औँ वर्षमा
तिम्रो लागि हार्न सक्छु : समीक्षा अधिकारी